ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: တခုခုတော့ လွဲနေပြီ
(Khin Ma Ma Myo's Facebook Status)
ကျွန်မအနေနဲ့ သံရုံးက ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Travel certificate နဲ့ မြန်မာပြည်ကို တရားဝင် ပြန်လာတာဖြစ်ပေမယ့်၊ ယူကေကနေ shipping နဲ့ သယ်ဆောင်လာတဲ့ စာအုပ်တွေကိုကျတော့ ဆိပ်ကမ်းမှာ ထုတ်ယူခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်တဲ့ ပတ်စ်ပို့ မပြနိုင်လို့တဲ့။ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာကတည်းက တခါဝင်သုံးဖို့ထုတ်ထားပေးတာဆိုပြီး၊ travel certificate ကို သိမ်းလိုက်ပြီးမှတော့ ဘာကိုကျွန်မ သွားပြနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မမျက်စိမှိတ်ပြီး သည်းခံလိုက်ပါတယ်။ လူကြီးတယောက်ယောက်ရဲ့ စာပါလာရင် လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ စကားဦးသန်းဖိတ်ခေါ်မှုကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ လူကြီးနဲ့ကပ်ပြီး အခွင့်အရေးယူမှုတွေ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ စနစ်ဆိုးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မက လူကြီးနဲ့ ကပ်ပြီးမှ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တွေကို ထုတ်ယူခွင့်ရမယ်တဲ့လား။ ဒါကို ကျွန်မ လက်မခံနိုင်ပါ။
(၂၄၊ ၅၊ ၂၀၁၄)
umg fyoe said...
Actually we all need to fight this bad system under current government. If not, all will surfer. So to fight that bad system, all Myanmar must take responsibility each them self. If not, cannot! If 1st generation didn't work their duty and responsibility completely, sure next 2nd generation will surfer....